मलेशियाको गृहमन्त्रीको चे’तावनी, ३१ दिसम्बर पछि ठूलो स्तरमा छापा मारिन्छ ! - jagritikhabar.com
मलेशियाको गृहमन्त्रीको चे’तावनी, ३१ दिसम्बर पछि ठूलो स्तरमा छापा मारिन्छ !
क्वालालम्पुर , २४ कात्तिक ।
मलेशिया गृहमन्त्री हमजाह को चे”तावनी रिक्या’लिब्रेसन ३१ दिसम्बर २०२१ मा सके पछि ठूला स्तरमा छा”पा हा”न्ने र इलिगल कामदारलाई डिपोर्ट गर्ने जनाएको छ ।
अब मलेसिया सरकार क”डा रुपमा प्रस्तुत हुने र दिएको मौकामा पनि रिक्या’लिब्रेसन कार्यक्रममा सहभागी नहुनेलाई का’रबाही गरिने जनाएको हो । मलेशिया गृहमन्त्री हमजाह को चे”तावनी रिक्यालि’ब्रेसन ३१ दिसम्बर २०२१ सम्म रहने छ ।
त्यतिबेलासम्म इलिगल सअबै कामदार कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । सुरुमा जुन देखिसुरु गरेको घर फिर्ती योजना रहेको मलेसिया सरकारले को’रोनाको कारण देखाउदै फेरि इलि’गलहरुलाई घर फिर्ताको मौका दिने भएको छ ।
सुरुमा ६ जुनदेखि ईन्डोनेसियाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरु गरेको मलेसियाले फेरि स्वदेश फर्किन मौका दिने भएको छ । अन्य देशका नागरिकलाई पनि फेरि स्वदेश फर्किनको लागी सुरु गरिने तयारी भएको मलेसियाका रक्षा मन्त्री
ईस्माईली सा’व्री याकोवलाई उधृत गर्दै स्थानीय पत्रिका ‘द स्टार’ले जनाएको छ । फर्कने कामदारको सुरुमा को’रोना परीक्षण गरिनेछ । परीक्षणमा काे’रोनाको संक्र’मण नदेखिएकाहरुलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरिनेछ ।
हाल मलेसियाको घरफिर्ती केन्द्रमा सबैभन्दा धेरै इन्डोनेसियाली र नेपाली नागरिकहरू रहेका छन । मलेसिया सरकारले मलेसियाको विभिन्न जेलमा रहेका अवैधा’निक हैसियतका आफ्ना नागरिक घर फिर्ता लैजान विभिन्न देशका सरकारलाई अनुराेध गरेको छ ।